Aerosols, iwo ma particles anofarira kupisa kwepasi | Green Renewables
Aerosols, iwo ma particles anofarira kupisa kwepasi
ari aerosol inosvina zvidimbu zvidiki zviripo mumhepo. Ivo vane basa rekuumbwa kwemakore uye, panguva imwechete, vanopa kune iyo greenhouse mhedzisiro uye iyo kudziya mamiriro ekunze.
ari aerosol inosvina ivo zviripo varipo mumhepo. Vanogona kuuya kubva kumasango emoto kana kuputika kwemakomo, semuenzaniso, asiwo kubva pakupisa kwe mafuta zvisaririra. Kunyangwe zviri zvevanhu kana zvakasikwa mavambo, izvi zvakanaka zvikamu zviri, pakati pevamwe, zvinokwanisa kusimudzira mhedzisiro yemakomba muozone layer.
Ivo vanoita chinzvimbo mukuumbwa kwemakore, kugadzirisa kwavo kuumbika kana hunhu hwavo uye nekudaro vanotora chikamu mugreenhouse mhedzisiro, yakawanda kana yakawanda seEC. Calypso, satellite ye cnes, anga achivatarisa kwemakore mapfumbamwe netariro yekunyatsonzwisisa maitiro avo. Ichi chishandiso chinokwanisa kuyera nenzira kwayo hunhu hwezvikamu zvakasiyana zve mamiriro ekunze.
ICnes inzvimbo yeruzhinji inotarisira kupa nekuitisa mutemo wedenga weFrance mukati meEurope. Yakagadzirwa muna 1961, iyo cnes vagadzire masatellite masisitimu uye marunzira emangwana anopindura zvido zvevanhu. Cnes inoita basa rakakosha mu chiitiko nzvimbo nnyika, KuEurope nekune dzimwe nyika kuve simba rekufambisa, hunyanzvi hwekubatsira basa, uye nzvimbo ye specializing michina. Muhukama hwechigarire nemasimba eruzhinji uye nharaunda dzesainzi nemaindasitiri, inogadzirira uye inoita mapurogiramu nzvimbo itsva.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Green Renewables » Environment » Tora co2 » Aerosols, iwo ma particles anofarira kupisa kwepasi
Tiger zana chete dzinosara muSundarbans delta mangrove swamp